बढ्दै राज्यविहीनताको जोखिम::KhojOnline.com
बढ्दै राज्यविहीनताको जोखिम
युरोपको शरणार्थी संकटले राज्यविहीनताको अन्तरनिहित समस्यालाई बाक्लो पार्दै लाने देखिएको छ। विशेषज्ञहरू शरणार्थीमा बढ्दो सन्तान उत्पादनबाट राज्यविहीन पिंढीको उदय हुने बताउँछन्।
सिरियाको लैंगिक विभेदजन्य राष्ट्रियता कानुन र युरोपेली युनियनको वेप्रभावी कानुनी प्रबन्धबीच च्यापिएर सिरियाली शरणार्थीबाट युरोपमा जन्मने बच्चाहरू राज्यविहीन बन्ने उच्च खतरा छ। सीमान्तीकरणको यो कठोर अवस्थाले करिब १ करोड बालबालिका प्रभावित हुने देखिन्छ।
सिरियाली कानुनअनुसार पुरुषले मात्र आफ्ना बालबालिकालाई नागरिकता दिलाउन सक्छ। राष्ट्रसंघको अनुमानमा २५ प्रतिशत सिरियाली घरपरिवार पितारहित छन्।
‘युरोपमा पुन:स्थापित भएका थुप्रै त्यस्ता महिला छन् जसका पति वा पार्टनर मारिए वा हराए, अनि अहिले आफ्ना बच्चाका साथ वा गर्भवती अवस्थामा युरोप आइपुगेका हुन्। त्यसकारण यो ठूलो समस्या बनिरहेको छ,’ नेदरल्यान्डस्थित इन्स्टिच्युट अन स्टेटलेसनेस एन्ड इन्क्लुसनकी जाहरा अलाबाराजीले भनिन्।
साना (नाम परिवर्तन), ३५, ले गत वर्ष वर्लिनमा छोरी सिवा (नाम परिवर्तन) लाई जन्म दिइन्। ‘म सिरियाली दूतावासमा गएर आफ्नो अवस्था जाहेर गरें। तर उनीहरूले सिवालाई पासपोर्ट दिन नसकिने बताए। किनकी बाबु सिरियाली नै हुन आवश्यक छ, बाबुआमा दुवै विवाहित भएका अवस्थामा बच्चा जन्मनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
अन्य युरोपेली मुलुकजस्तै जर्मनीले पनि आफ्नो भूमिमा जन्मेकै आधारमा स्वत: कसैलाई नागरिकता दिँदैन। यसको मतलव हुन जानेछ, अब सिवा कहींको पनि नागरिक हुने छैनन्। बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिसहितका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूअनुसार कुनै पनि मुलुकको सरकारले आफ्नो भूमिमा जन्मेर पनि कुनै कारणले राज्यविहीन बन्न जाने अवस्थाका बालबालिकालाई नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तर कमै मात्र युरोपेली युनियन सम्बद्ध मुलुकले यो सिद्धान्तलाई आफ्नो घरेलु कानुनमा समेटेका छन्।
शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको अनुमानअनुसार कम्तीमा ६ लाख ८० हजार मानिस युरोपमा कुनै पनि मुलुकको नागरिकताबिनै बसोबास गर्छन्। त्यस्तो मानिसको यकिन तथ्यांक लिन कठिन भएकाले संख्या अझै बढी हुन सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
राज्यविहीनातको समस्या दक्षिणपूर्वी एसियामा एकदमै चर्को छ। राष्ट्रसंघका अनुसार बर्मामा ८ लाख १० हजारभन्दा बढी राज्यविहीन मानिस बसोबास गर्छन्। तर युरोपमा पछिल्लो समयको अनपेक्षित शरणार्थी प्रवेशका कारण यो समस्या झन् खराब हुने खतरा छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बाल्टिक क्षेत्रका रोमा र रसियाली भाषी समुदाय यो समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिन्छन्। युरोपमा सिरियाली शरणार्थीहरूलाई जोडेर यो समस्याका विषयमा कुनै अनुसन्धान भएको देखिँदैन। तर धेरैको सिवाजस्तै दशा हुन सक्ने खतरा छ।
राज्यविहीनताले युरोपमा ठूलो समस्या खडा गर्न सक्छ। धेरै अभिभावकहरूलाई त आफ्ना सन्तान राज्यविहीन रहेको भन्ने ज्ञान नै छैन। शरणार्थीका बच्चाले वयष्क भएपछि मात्र आफ्नो हविगत महसुस गर्छन्। जब उनीहरूले कानुनी रूपमा काम गर्न, विवाह गर्न, सम्पत्ति जोड्न, मतदान गर्न अनि औपचारिक पढाइ गर्न पाउँदैनन्।
उच्चायोगद्वारा यसै महिना सार्वजनिक एक रिपोर्टअनुसार राज्यविहीनताले बालबालिकालाई उत्पादनशील र सफल जीवनबाट वञ्चित गराउँछ। जसले गर्दा उनीहरू र परिवारमै नोक्सानदायी मानसिक असर पार्छ। ‘जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नपाउनु भनेको अस्तित्वमै नरहनुजस्तै हो,’ रिपोर्टले एक सिरियाली शरणार्थीलाई उद्धृत गरेको छ।
सिरियासँग सीमावर्ती मुलुकहरूमा यो समस्या पहिल्यै भयावहपूर्ण भइसकेको छ। राष्ट्रसंघका अनुसार लेबनानमा सिरियाली शरणार्थीबाट जन्माइएका ३० हजार शिशुहरू राज्यविहीनताको जोखिममा परिसकेका छन्। रिफियुजिज इन्टरनेसनल (आरआई) को एक अनुसन्धानका अनुसार सन् २०११ यता टर्कीमा सिरियाली शरणार्थीबाट जन्मेका ६० हजार बालबालिका पनि त्यही अवस्थामा छन्। शरणार्थीहरूले उपयुक्त तवरमा जन्मदर्ता गर्न नसक्नु पनि ती देशमा यो जोखिमको आंशिक कारण बन्न सक्छ। खास गरी बलात्कारपछि गर्भधारण गरी जन्मेका बच्चा, शरणार्थी महिलाले उमेर नपुग्दै ती देशका पुरुषसँग अवैध विवाह गरी जन्माएका बच्चा यस्तो जोखिममा छन्।
‘सिरियाभित्रै वा अन्य देशमा शरणार्थीमाथि भइरहेको यौन हिंसा के कति भइरहेको भन्ने मापन हुन सकिरहेको छैन। तर एकदमै बढी छ,’ आरआईएका डारिल ग्रिसग्रयावर भन्छन्, ‘त्यसैले मलाई लाग्छ, हामीले सोचेभन्दा बढी यो समस्या छ। त्यसका अलावा, धेरैका बाबु मरेका छन्, सिरियामा जेल परेका, वा बेपत्ता भएका छन्। त्यसकारण उनीहरूको जन्मदर्ता प्रमाणीकरण एकदमै कठिन छ।’ साथै, आफ्नो
वैधानिक हैसियत जनाउने कागज नभएका जोडीहरूका लागि पनि राज्यविहीनता एउटा गम्भीर विषय हो। रामा र रसिद भिन्नाभिन्नै रूपमा सिरिया छाडेर हिँडेका हुन्। उनीहरूको टर्कीमा भेट भयो। उनीहरूले अन्ताकायामा छोरा साइद जन्माए। जुन ठाउँ सिरियाली सीमाबाट केही माइल मात्र टाढा छ।
उनीहरूले अनौपचारिक समारोहबीच टर्कीमै विवाह गरे। विवाहित भएको वैधानिक कागज कसरी हुनु र? अनि छोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा पनि उनको नाम छैन। ‘ऊ को हो? उसको राष्ट्रियता के हो?’ छोरालाई काखमा खेलाउँदै उनले आसविहीन मुद्रामा भने। उनी अब छोराले स्कुलै जान नपाउने हो कि भन्ने डरमा छन्।
बर्लिनमा आफ्ना बाबुको नाम भन्न नसकेपछि सानालाई सरकारी अधिकारीहरूले संशयका साथ हेरे। त्यसपछि उनकी आमालाई उनको यौनिक इतिहासबारे सोधपुछ थालियो। अहिले नागरिकताका लागि प्रमाणीकरण गर्नुका सट्टा सिवालाई ट्राभल डकुमेन्ट मात्र दिइएको छ। जसबाट उनी मात्रै शरणार्थी भनेर चिनिन्छिन्।